स्वस्थ नेपाल Healthy Nepal: January 2011
स्वास्थ्य बिषय भन्ने वित्तिकै सम्बेदनशील, गम्भिर भन्ने सबैको मनमा आँउछ, र यस सम्बन्धी लेखहरुमा झट्ट कसैको पनि अभिरुची जागी हाल्दैन। आज म केही चलचित्रहरु र त्यस्मा भएका पात्रहरुका स्वास्थ्य सम्बन्धी भएका रोचक अवस्था/ रोगहरुको बारेमा चर्चा गर्दैछु। आशा छ यो लेखले स्वास्थ्यका विभिन्न अवस्था/ रोगहरु सम्बन्धी चासो बढ्नेछ।
१. 'एक्स-मेन' (X-men) र त्यस्का पात्रहरु :
'एक्स-मेन' म्युटेन्ट (Mutant) हरुको बिषयमा बनेको फिल्म हो। वुल्भराइन, प्रोफेसर ज्याभियर, म्याग्नेटो, साइक्लोप्स, टोड आदि विभिन्न पात्रहरु सबैसँग कुनै न कुनै विशेश शक्ति हुन्छ। कथा अनुसार तिनीहरुमा ती शक्तिहरु म्युटेसन (Mutation) भनिने एउटा मेडिकल प्रक्रियाबाट आएको हुन्छ। म्युटेसन साधारन्तया पनि भैरहेको हुन्छ। मानिसको शरीरका हरेक गुणहरु, विभिन्न अङहरु कस्तो हुने आदि सम्पुर्ण सूचनाहरु कोशहरुमा हुने क्रोमोजोमहरुमा रहेको हुन्छ, त्यसैले नै बुवाआमा र छोराछोरीको गुणहरु मिल्ने हुन्छ। ती क्रोमोजोमका भागहरुमा केही गरी परिवर्तन भएमा (जुन प्रक्रियालाई म्युटेसन भनिन्छ) मानिसको गुणहरु पनि परिवर्तन हुने, रोगहरु देखिने हुन्छ। यो फिल्ममा चाँही त्यस्तो परिवर्तन भएर उनीहरुमा विशेश शक्ति आएको देखाइएको छ। जस्तै: 'वुल्भराइन'को कुनै पनि घाऊ, चोट एक्दमै छिटो निको हुने शक्ति हुन्छ। एक्स-मेन ग्रुपका मुख्य 'प्रोफेसर ज्याभियर' सधैं व्हिल चेयरमा बस्ने भए पनि उनको मस्तिस्क धेरै नै शक्तिशाली हुन्छ, उनी टेलिप्याथी गर्न सक्छन। एक्स-मेन कथा को मुख्य खलपात्र 'म्याग्नेटो'सँग इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक शक्ति (Electromagnetic power) प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ।
२. इस्पाइडर मेन (Spiderman):
इस्पाइदर मेनले पनि म्युटेसन (Mutation) बाटै आफ्नो विशेश शक्ति पाएका हुन्। एउटा संग्रहालयमा घुम्न जादा माकुराले टोकेपछि पीटर पार्करको क्रोमोजोममा परिवर्तन आउछ र उनमा माकुराको जस्तै भित्तामा हिंड्न सक्ने, माकुराले जस्तै जालो बुन्न सक्ने गुनको विकास हुन्छ र उनी इस्पाइदर मेन बन्छन्।
३. ‘ट्विलाइट/ Twilight’ का एड्वार्ड कलेन र ज्याकोब ब्ल्याक:
इस्टेफेन मेयेर द्वारा लिखित युवा तथा बालबालिकाहरुमा बहुप्रचलित उपन्यास 'ट्विलाइट' मा आधारित फिल्मका पात्रहरु एड्वार्ड कलेन (Edward Cullen) भेम्पायर हुन भने ज्याकोब ब्ल्याक (Jacob Black) वेरवुल्फ हुन्। भेम्पाइर र वेरवुल्फको वर्णन 'पोर्फाइरिया (Porphyria)' भनिने एउटा मेडिकल रोगसँग केही मिल्न जान्छ। भेम्पाइरले सुर्यको प्रकाश सहन नसक्ने हुन्छ, त्यस्तै वेरवुल्फ चन्द्रकिरण परेपछी मानिसबाट ब्वासोमा परिवर्तन हुने हुन्छ। पोर्फाइरिया रोगमा विरामीले प्रकाश सहन नसक्ने हुन्छ र प्रकाश पर्दा उस्को छालामा परिवर्तन आएर भयानक देखिने हुन्छ। साथै मानसिक समस्या साइकोसिस, डिप्रेसन पनि देखिने हुन्छ।
४. दि क्युरियस केस अफ बेन्जामिन बटन (The Curious Case of Benzamin Button):
८१औ ओस्कार पुरस्कार ( उत्कृष्ट चलचित्र ) पाएको यो फिल्मका मुख्य पात्र बेन्जामिन बटन (ब्राड पिट/ Brad Pitt) लाई अनौठो रोग लागेको हुन्छ। उनी जन्मिदा बुढो रुपमा जन्मन्छन् र बिस्तारै समयसंगै जवान हुँदै युवा अवस्थामा पुग्छन् र अन्तमा सानो बच्चा भएर आफ्नै प्रेमिकाको काखमा मर्छन्। यो अचम्मको रोग वास्तविक जीवनमा सम्भव त छैन तर जन्मिदा बुढो जस्तो रुपमा जन्मने भने प्रोजेरिया (Progeria) भन्ने रोगमा हुन्छ। तैपनि सुन्दै अचम्म लाग्ने यो कथा उत्कृष्ट मेकअप, भिजुअल एफेक्टले गर्दा हेर्दा रमाइलो लाग्छ।
५. गजनी (Ghajini):
आमिर खान अभिनीत सुपर हिट चलचित्र 'गजनी' मा नायकलाई टाउकोमा लागेको चोटको कारण बिर्सने रोग एन्टेरोग्रेड एम्नेसिया (Anterograde Amnesia) हुन्छ। मस्तिस्कको सम्झनाको केन्द्र (Memory center) हिप्पोक्याम्पस (Hippocampus) मा चोट लागेमा नयाँ सम्झनाहरु बनाउन नसक्ने हुनसक्छ तर फिल्ममा देखाएको जस्तो ठीक १५-१५ मिनेटमा बिर्सने भने पर्दा बाहिरको संसारमा हुन असम्भव नै छ।
यी त भए, मेडिकल रोग/ अवस्थाहरु लाई आधार बनाएर स्रिजना गरिएका केही काल्पनिक, हुन नसक्ने पात्रहरु। तर कुनै कुनै फिल्महरुमा कुनै मेडिकल रोग/ अवस्थालाई यति राम्ररी उतारिएको हुन्छ की त्यो पात्र त्यो रोगको पर्यायवाची बन्न जान्छ। त्यो फिल्म हेरेपछी त्यो रोग, त्यो रोगका रोगीहरुको मानसिकताको बारेमा धेरै नै थाहा हुन्छ। त्यस्ता केही फिल्महरु र तिनमा देखाइएका रोग/ अवस्था हरु:
१. अ ब्युटिफुल माइन्ड (A Beautiful Mind):
रसेल क्रो (Russel Crowe) द्वारा अभिनित यो फिल्म नोबेल पुरस्कार विजेता जोन फोर्ब्स न्यास (John Forbes Nash) को जीवनीमा आधारित छ। यस फिल्मका प्रमुख पात्र पारानोइड स्किजोफ्रेनिया (Paranoid Schizophrenia) रोगबाट पीडित हुन्छन् र त्यस दौरानमा उनले भोगेका, उनको जीवनमा आएका उतारचढावहरुलाई अति नै राम्रो तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ। यसले ७४ औ ओस्कार पुरस्कार ( उत्कृष्ट चलचित्र ) पनि जितेको थियो। पारानोइड स्किजोफ्रेनिया रोग र त्यस्का विरामीको मनोभावना बुझ्न यो फिल्म एकपटक हेर्नै पर्ने हुन्छ।
२. रेन मेन (Rain Man):
डस्टिन हफ्मेन (Dustin Huffman) र टम क्रुज (Tom Cruise) द्वारा अभिनित यो फिल्मले ६१औ ओस्कार पुरस्कार ( उत्कृष्ट चलचित्र, उत्कृष्ट अभिनेता ) पाएको थियो। यसका प्रमुख पात्र रेमन्ड ब्याबिट वा रेन मेन, जस्को भूमिका डस्टिन हफ्मेन निभाएका छन्, लाई अटिजम (Autism) रोग हुन्छ। नेपालतिर त्यति नसुनिने (नसुनिने भन्नाले नहुने भन्न खोजिएको हैन, तर पत्ता नलाग्ने, पत्ता लागे पनि वास्ता नगरिने) यो रोग बालबालिकाको मस्तिस्क विकास हुने बेलामा सुरु हुने गर्छ र बच्चाको सामाजिक व्यबहार, भाशाको विकासमा असार गर्छ।
३. लव एन्ड अदर ड्रग्स (Love and Other Drugs):
सन् २०१० मा रिलिज भएको जेक गेलिनहाल (Jake Gyllenhaal) र एन्नी हाथ्वे (Anne Hathaway) अभिनित यो एउटा रोमान्टिक फिल्म हो। यस्मा एन्नी हाथ्वेले निभाएकी पात्रलाई पार्किन्सन्स डिजिज (Parkinson’s Disease) हुन्छ। यो रोगले गर्दा उनले र उनीसँग सम्बन्धितहरुले भोग्नु परेका समस्याहरुलाई यो फिल्ममा देखाइएको छ। एन्नी हाथ्वेले पार्किन्सन्स रोगको विरामीको भूमिकामा राम्रो अभिनय गरेकी छिन्।
४. पा (Paa):
यो फिल्ममा अमिताभ बच्चनको चरित्र 'औरो' लाई दुर्लभ वन्शानुगत रोग 'प्रोजेरिया/ Progeria' लागेको हुन्छ। त्यहि रोग र त्यसले गर्दा उस्को परीवार र उसलाई पर्ने दु:ख, बुवाआमासँगको उस्को सम्बन्धको बारेमा यो फिल्ममा देखाइएको छ। अभिसेख बच्चन (जो वास्तविक जीवनमा अमिताभ बच्चनका छोरा हुन्) ले 'औरो' को बुवाको भूमिका निभाएका छन्।
५. तारे जमिन पर (Taare Zameen Par):
बलिवुडको सन् २००७ को उत्कृष्ट यो फिल्ममा मुख्य पात्र इशान (दर्शिल शफारी) लाई डिस्लेक्सिया (Dyslexia) अर्थात पढ्नलाई समस्या पर्ने एउटा मेडिकल अवस्था हुन्छ। त्यहि बिषयलाई लिएर बनाइएको यो फिल्ममा त्यस्ता बालबालिकाहरुलाई कसरी व्यबहार गर्ने, कसरी हौसला बढाउने भनेर राम्रोसँग देखाइएको छ।
६. माइ नेम इज खान (My name is Khan):
यो फिल्ममा शाहरुख खानले एस्पर्जर सिन्ड्रोम (Asperger Syndrome) को रोगीको भूमिका निभाएका छन्। अटिजम (Autism) जस्तै लक्षण हुने यो रोगको कथालाई लिएर मुस्लिम समाज प्रतिको बढ्दो नकारात्मक सोचाइको विरोध गरेका छन्। यो फिल्ममा उनको अभिनय सर्हानिय छ।
यस्ता चलचित्रहरुले विभिन्न मेडिकल रोग/ अवस्थाहरुलाई (चाहे ती दुर्लभ नै किन नहुन्) आफ्ना कथावस्तुमा प्रस्तुत गरी जनमानसमा रोगहरु सम्बन्धी चेतना जगाउने काम गरेका छन्। यस्ता अरु पनि धेरै फिल्महरु छन्, तपाईंको सम्झनामा कुनै भए यहाँ लेख्न नबिर्सनु होला। अनि अर्को कुरा, हाम्रो नेपाली चलचित्रहरुले पनि यस्ता बिषयमा ध्यान दिनु पर्ने हैन र?
Posted by Dr. Samir Lama, MD General Practice at 7:54 PM 1 comments
जाडोको मौसम चलिरहेको छ। जाडोको बेलामा हातखुट्टाका जोर्नीहरु दुख्ने, सार्‍हो हुने आदि समस्या धेरै नै देखिन्छन। त्यसैले आज यसबारे केही कुरा लेख्दैछु।
जोर्नी (Joint) भनेको के हो?
दुई वा दुई भन्दा बढी हाडहरु जोडीएको ठाउँलाई जोर्नी (Joint) भनिन्छ। यसले शरीरका भागहरु चलाउनलाई मद्धत मिल्छ। जोर्नीमा जोडीएका हाडहरुको सतहमा नरम खालको कुर्कुरे हाड (Cartilage), जोर्नीमा हाडहरु चल्दा घर्सण कम गर्नको लागि तेल जस्तो तरल पदार्थ साइनोभियल फ्लुड (Synovial fluid), हाडहरुलाई समाएर राख्ने तन्तु लिगामेन्ट (Ligament) आदि भागहरु हुन्छन्। जोर्नीले राम्ररी काम गर्न यी सबै भागहरु स्वस्थ अवस्थामा हुनु जरुरी हुन्छ।
जोर्नी दुख्नु भनेको के हो?
जोर्नी दुख्नु भनेको एउटा लक्षण हो र यो सयौ रोगहरुमा देखिने गर्छ। त्यस्तै जोर्नी दुख्नु अर्थात आर्थ्राल्जिया (Arthralgia) र जोर्नी रातो हुनु, सुन्निनु, तातो हुनु अर्थात आर्थ्राइटिस (Arthritis) भनेको फरक फरक कुराहरु हुन। बढी प्रयोग भएर जोर्नीमा भएका हाडहरुका सतहहरु खियिएर जोर्नी दुख्ने अर्थात ओस्टिओ आर्थ्राइटिस (Osteoarthritis), शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले चाहिने भन्दा बढी वा अनावश्यक क्षेत्रमा काम गरेर जोर्नी दुख्ने जस्तै रुमाटोइड आर्थ्राइतिस (Rheumatoid Arthritis), एस.एल.इ. (SLE), जोर्नीको सन्क्रमण भएर जोर्नी दुख्ने, सुन्निने जस्तै सेप्टिक आर्थ्राइटिस (Septic Arthritis), शरीरमा हुने रसायनिक प्रक्रियाको गड्बढीको कारणले जोर्नी दुख्ने, सुन्निने जस्तै गाउट (Gout), सिउडो गाउट (Pseudogout) जस्ता विभिन्न कारणले विभिन्न रोगहरुमा जोर्नी दुख्ने, सुन्निने, अररो हुने समस्या देखिन्छन्। त्यस्तै रोगको प्रकृति अनुसार जोर्नीको समस्या सँगसंगै अरु लक्षणहरु पनि देखिने गर्छन्। जस्तै ज्वरो आउने, अनुहारको छाला रातो हुने, फोक्सो, म्रिगौला जस्ता विभिन्न अङहरुमा असर पर्ने हुन्छ।
जोर्नी दुख्ने समस्या धेरै नै देखिने भएपनि प्राय:जसो यी समस्याहरु आत्तिनु पर्ने खालको भन्दा पनि अत्यास लगाउने खालका हुन्छन्। अर्थात यिनका पछाडि डराउनु पर्ने खालको ठुलो रोग नभएर साधारण रोगहरु नै बढी हुन्छन्।
जोर्नी दुख्ने समस्या भएमा के गर्ने?
जोर्नी दुख्ने समस्या पाको उमेरका बुढाबुढीहरुलाई मात्र नभै सबै उमेरमा देखिन सक्छ। जोर्नी दुख्ने समस्या सुरु भएपछी आफुलाई जोर्नी दुख्ने मात्रै हो वा जोर्नी सुन्निने, जोर्नी माथिको छाला रातो, तातो हुने, जोर्नी अररो हुने हुन्छ बिचार गर्नुपर्छ। प्राय: गम्भिर समस्याहरुमा जोर्नी दुख्ने (Arthralgia) मात्रै नभै जोर्नी रातो, तातो हुने, सुन्निने (Arthritis) पनि हुन्छ। त्यस्तै अरु लक्षणहरु पनि देखिएका छन् या छैनन् ख्याल गर्नुपर्छ। साथै सधैंभरी लगातार दुखिरहने हो या कुनै निस्चित समय जस्तै विहान, राती, काम गर्दा, आराम गर्दा दुख्ने हो ध्यानमा राख्नुपर्छ। जोर्नी दुखाइ कत्तिको बढी छ, अन्य लक्षणहरु छन् छैनन् त्यो विचार गरेर चिकित्सकलाई कति चाँडो भेट्ने भन्ने निर्णय गर्न सकिन्छ। तर पहिलो पटक यो समस्या भएको हो भने चिकित्सकसँग भेटेर के कारणले भएको हो जाँच गर्ने (आवस्यक्ता अनुसार रगत जाँच, एक्स-रे आदि), सल्लाह गर्ने गर्नुपर्छ।
जोर्नी दुखाइको उपचार रोग अनुसार साधारण दुखाइको औषधी (Painkillers/ Analgesics), फिजिकल थेरापी (Physical Therapy), स्टेरोइड (Steroid), Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs/ DMARDs (मेथोट्रेक्सेट/ Methotrexate, सल्फासालाजिन/ Sulfasalazine आदि) देखि लिएर अप्रेसन (पुरै जोर्नी नै परिवर्तन गर्ने, जोर्नीको खराब भएको भाग परिवर्तन गर्ने आदि) हुन्छन्। त्यसैले आफ्नो जोर्नी दुखाइको कारण के हो, कुन रोगले गर्दा यो समस्या भएको हो आफ्नो चिकित्सकसँग छलफल गरी उपयुक्त पद्धती अप्नाउनुपर्छ।
जोर्नी दुखाइसंगै निम्न केही लक्षणहरु पनि छन् भने त्यसलाई गम्भिरतापुर्वक लिइ तुरुन्त डक्टरलाई देखाउनुपर्छ।
१. उमेर ५० वर्श भन्दा बढी वा १७ वर्श भन्दा कम भएमा,
२. उपचार गर्दा/ औषधी खाँदा पनि ठीक नभएमा,
३. शरीर दुब्लाउदै गएमा/ विगत ६ महिनामा १० केजी भन्दा बढी तौल घटेमा,
४. ४-६ हफ्ता भन्दा बढी लगातार जोर्नीहरु दुखिरहेमा,
५. रातको समयमा वा आराम गरेको बेला जोर्नीहरु दुख्ने भएमा,
६. लगातार ज्वरो आइराख्ने भएमा (१००.५ डिग्री फरेन्हाइट भन्दा बढी) आदि
जोर्नी दुखाइ को लागि केही घरेलु उपचारहरु:
१. दुखेको जोर्नीमा तेलले वा दुखाइको औषधी भएको मलमले मालिस गरेमा दुखाइ कम हुन्छ।
२. तातोपानी/ दुधमा बेसार मिसायेर दैनिक खाने गरेमा जोर्नी दुख्ने समस्या धेरै काम हुन्छ।
३. गोमुखासन योगा जोर्नी दुखाइको समस्या को लागि धेरै राम्रो हुन्छ।
४. जोर्नी दुख्यो भनेर आरम गर्नु भन्दा सके जति चलाउने, कसरत गर्ने गर्नुपर्छ। दैनिक कसरत गर्नाले जोर्नीहरुको लचक्ता बढ्नुको साथै हाडहरु पनि बलियो हुन्छ।
५. पानी प्रशस्त मात्रामा पिउने गर्नुपर्छ।
यी घरेलु उपचारका साथै अन्य थुप्रै उपाय, सुझावहरु पत्रपत्रिका, ईन्टरनेट आदिमा पढ्न पाइन्छ। तर यी सबै आफुमा लागु गर्नु अघि आफ्नो चिकित्सकसँग आफ्नो समस्याको बारेमा के कारणले यस्तो भएको हुनसक्छ, के के उपचार पद्धती अप्नाउन सकिन्छ, के के सावधानी अप्नाउने भनेर राम्रोसँग छलफल गर्नुपर्छ। जोर्नी दुख्ने समस्या धेरै नै बल्झीरहने हुनाले यस्ता विरामीहरुमा दुखाइको औषधी/ पेनकिलर (Painkiller/ Analgesic) बढी प्रयोग गर्ने र त्यसले गर्दा नराम्रो असर पर्ने हुनसक्छ।
बाथ भनेको के हो?
नेपालीमा 'बाथ' भनेर सबै किसिमको जोर्नी दुख्ने समस्यालाई जनाइन्छ। त्यसैले 'बाथ' भन्नाले रोग भन्दा पनि जोर्नी दुख्ने कुनै पनि समस्या भनेर बुझ्दा हुन्छ।
युरिक एसिड (Uric Acid) भनेको के हो?
युरिक एसिड भनेको शरीरमा प्रोटिनको रसायनिक प्रतिक्रिया हुँदा खेरी निस्कने एक प्रकारको पदार्थ हो। जोर्नीहरु (विशेश गरि खुट्टाको औलाका जोर्नीहरु) मा युरिक एसिडको मात्रा बढी भएर त्यस्का लवण (salt) हरु क्रिस्टलाइज (crystallize) भएर जोर्नीहरुमा जम्मा भई जोर्नीहरु दुख्ने, सुन्निने, रातो हुने रोगलाई गाउट (Gout) भनिन्छ। त्यसैलाई नेपालमा जनबोलीमा 'युरिक एसिड' भनिन्छ। रगतमा युरिक एसिडको मात्रा बढ्ने र गाउट हुने समस्या जति एक अर्कासँग सम्बन्धित छन् भनेर तपाईं हामी सोच्छौ, सत्य कुरा त्यसो हैन। रगतमा युरिक एसिडको मात्रा धेरै भए पनि कतिमा गाउटको समस्या देखिदैन भने कति गाउटको रोगीहरुको रगतमा युरिक एसिडको मात्रा सामान्य नै हुन्छ। त्यस्तै गाउट रोग छ छैन भनेर थाहा पाउन गर्नुपर्ने जाँच रगतमा युरिक एसिडको मात्रा हेर्ने (जुन हामीहरुमा प्रचलित छ) नभएर दुखेको जोर्नीमा युरिक एसिडको क्रिस्टल (Crystal) छ छैन भनेर हेर्ने हो, जुन हामीहरु सायदै गर्छौ होला।
जोर्नी दुख्ने विभिन्न रोगहरुको बारेमा वृस्तित रुपमा पछिका लेखहरुमा चर्चा गर्नेछु।
Posted by Dr. Samir Lama, MD General Practice at 9:48 AM0comments
जन्डिस भनेको कुनै रोग हैन, यो त एउटा लक्षण मात्र हो, जुन सयौ रोगहरुमा देखिनसक्छ (जस्तै हेपाटाइटिस ए, बी, सी, डी, इ, जाडरक्सीले गर्दा कलेजो बिग्रेमा, पित्तथैली, त्यसको नलीको पत्थरी, क्यान्सर आदि आदि )। तपाईं हामीले देखेकै होला गाँउघरतिर कसैलाई जन्डिस देखिएमा फुक्न जान्ने मान्छेकोमा लगेर जन्डिस निकालेर फालेको वा फुकेर निको पारेको। अनि जन्डिस भएको बेलामा बेसार, चिल्लो खानु हुदैन भनेर महिनौ दिनसम्म जाउलो खाएको। यो समस्या धेरै नै देखिने भएकोले आज यो सम्बन्धी केही जान्नैपर्ने कुराहरु लेख्दैछु।
जन्डिस भनेको के हो? जन्डिस हुँदा शरीर किन पहेलो देखिन्छ?
रगतमा बिलिरुबिन (Bilirubin) भन्ने पदार्थ सामान्य भन्दा बढी भएमा शरीरको छाला, आँखा पहेलो हुने हुन्छ, यसलाई नै जन्डिस भएको भनिन्छ। यही बिलिरुबिनको कारणले नै शरीर पहेलो देखिएको हो। साधारणतया रगतमा बिलिरुबिनको मात्रा, जम्मा ( टोटल ) बिलिरुबिन (Total Bilirubin) को १ मिलीग्राम/ डेसीलिटर भन्दा कम हुन्छ र डाइरेक्ट बिलिरुबिन (Direct Bilirubin) को मात्रा ०.३ मिलीग्राम/ डेसीलिटर भन्दा कम हुन्छ। अब प्रश्न आउँछ, यो बिलिरुबिन शरीर भित्र कसरी आउँछ, किन यसको मात्रा बढ्छ, कसरी यो बढ्नलाई रोक्न सकिन्छ, कसरी यसको उपचार गर्न सकिन्छ, फुक्दा खेरी किन र कसरी यो निको हुन्छ।
शरीरमा बिलिरुबिन कसरी बन्छ?
हाम्रो शरीर नाङो आँखाले देख्न नसकिने स-सानो जीवित कोसहरु मिलेर बनेको हुन्छ। ती कोसहरुको एउटा निश्चित आयु हुन्छ। हाम्रो शरिरका रक्तनलीहरुमा बग्ने रगतमा पनि थुप्रै किसिमका कोसहरु हुन्छन्, जस्मा एउटा रातो रक्तकोस (Red Blood Cells) हो। यसको आयु साधारणत: १२० दिन हुन्छ। आफ्नो आयु पूरा भएपछि यी राता रक्तकोसहरु मर्छन र यस्मा भएको हेमोग्लोबिन (जसले अक्सिजन बोक्ने काम गर्छ) बाट आइरन तत्व छुटिन्छ, अनि बाँकी भएको भागबाट बिलिरुबिन बन्छ। यो सबै प्रकिया शरीरको देब्रे फोक्सोको मुनि, करङहरु भित्र रहने अङ फियो (Spleen) मा हुन्छ। त्यसपछी पहिलो पदार्थ बिलिरुबिन रगतमा आउँछ। त्यसलाई इनडाइरेक्ट बिलिरुबिन वा अनकन्जुगेटेड बिलिरुबिन (Indirect or Unconjugated Bilirubin) भनिन्छ, जुन पानीमा नघुल्ने हुन्छ (मतलब यसलाई दिसापिसाबमा शरीर बाहिर फ्याल्न सकिदैंन)। त्यसपछी कलेजो/Liver (जुन शरीरको दाहिने फोक्सो मुनि, करङहरु भित्र हुन्छ)ले उक्त बिलिरुबिनलाई बिभिन्न इन्जाइमहरुको मद्दतले पानीमा घुल्न सक्ने वा डाइरेक्ट वा कन्जुगेटेड बिलिरुबिन (Direct or Conjugated) बनाउँछ। त्यो कन्जुगेटेड बिलिरुबिन पित्तको रुपमा पित्त थैलीमा जम्मा हुन्छ र दिसापिसाबमा शरीर बाहिर फालिन्छ।
विभिन्न रोगहरुमा कुनैमा डाइरेक्ट, कुनैमा इनडाइरेक्ट बिलिरुबिन र कुनैमा दुबैको मात्रा बढ्ने हुन्छ। यी सबै रोगहरुमा छाला, आँखा पहेलो देखिने भए पनि अरु लक्षणहरु फरक पर्ने हुन्छ।
यसरी सामान्य रुपमा राता रक्तकोसहरु मरेर त्यसको हेमोग्लोबिनबाट बिलिरुबिन बन्छ, जुन दिसापिसाबबाट शरीर बाहिर फालिन्छ।
बिलिरुबिनको मात्रा शरीरमा किन बढ्छ?
यो माथि भनिएको बिलिरुबिन बन्ने, जम्मा हुने र फ्याकिने सामान्य प्रक्रियाको कुनै पनि भागमा गडबडी भयो भने शरीरमा बिलिरुबिनको मात्रा बढेर जान्छ।
क) सामान्य भन्दा धेरै मात्रामा राता रक्तकोसहरु मर्दा (जुन हेमोलाइटिक एनेमिया भनिने रोगहरुमा हुन्छ।),
ख) कलेजोको खराबी भएमा (जुन हेपाटाइटिस रोगमा, बढी रक्सी सेवन गर्नाले, कलेजोको क्यान्सर आदि रोगहरुमा हुनसक्छ।),
ग) पित्त थैलीबाट पित्त बाहिर जाने बाटोमा कुनै रोकावट भएमा (जुन पित्त थैलीको नलीमा ढुङ्गा भएमा, वा मासु पलाएमा हुन्छ।)
जन्डिसले गर्दा के के समस्याहरु आउन सक्छन?
नवजात शिशुहरुमा हुने जन्डिस (Neonatal Jaundice) बाहेक अन्य जन्डिस स्वयम आफैले प्राय: केही समस्या दिदैन। जन्डिस एउटा लक्षण मात्र भएकोले यो थुप्रै रोगहरुमा देखिनसक्छ र समस्या जन्डिसले नभै ती रोगहरुको कारणले गर्दा देखिन्छ। जन्डिसकै कारणले चाँही छाला, आँखा पहेलो हुने, छाला चिलाउने, पिसाब पहेलो हुने, दिसा सेतो रंग हुने आदि हुनसक्छ। अन्यथा जन्डिस गराउने रोगहरुको कारणले विभिन्न समस्याहरु देखिन सक्छ। जस्तै- यदि हेपाटाइटिसको कारणले जन्डिस देखिएको हो भने ज्वरो आउने, खाना नरुच्ने, वान्ता हुने, पेट दुख्ने आदि हुन सक्छ। यो जन्डिसले गर्दा नभएर हेपाटाइटिस भाइरस (Hepatitis Virus)को सन्क्रमणको कारणले कलेजोमा खराबी हुनाले हुन्छ। त्यस्तै अत्यधिक जाडरक्सी सेवनले कलेजोमा खराबी देखिएर जन्डिस देखिएको हो भने पेट भित्र पानी जम्ने, पेट सुन्निने, रगत वान्ता हुने आदि हुनसक्छ। यी सबै जाडरक्सीले कलेजोको खराबी (Cirrhosis of Liver)को कारणले देखिने समस्याहरु हुन् न की जन्डिसले गर्दा देखिने समस्या।
जन्डिस लक्षण देखिने प्रमुख कारण/रोगहरु के के हुन्?
जन्डिस देखिने अवस्था/रोगहरुलाई माथि भनिए जस्तै गरि ३ प्रकारमा बाढ्न सकिन्छ।
१) बिलिरुबिनको बन्ने प्रक्रिया सामान्य भन्दा बढी हुने अवस्थाहरु: राता रक्तकोसहरु बढी मात्रामा मर्ने रोगहरु (हेमोलाइटिक एनेमिया)
२) कलेजोमा खराबी हुने अवस्थाहरु: अत्यधिक जाडरक्सी सेवनले कलेजोमा हुने खराबी (Cirrhosis of Liver), हेपाटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, कलेजोको वन्सानुगत रोगहरु, औषधीहरुको असरले गर्दा
३) पित्त थैलीको नलीमा रोकावत हुने अवस्थाहरु: पत्थरीको कारणले, क्यान्सर आदि
जन्डिसको उपचार के हो?
शरीरमा बिलिरुबिनको मात्रा माथि भनिएको भन्दा बढी भएमा जन्डिस हुन्छ। तर रगतमा बिलिरुबिनको मात्रा देखिदैमा आत्ति हाल्नुपर्ने, उपचार गरिहाल्नुपर्ने हुदैन। किनभने जन्डिस आफैले केही अवस्था बाहेक खास हानी गर्दैन र जन्डिस आफैको उपचार पनि हुदैन। बरु यो किन देखिएको हो, कुन रोगको कारणले देखिएको हो पत्ता लगाइ त्यो रोगको उपचार गर्नुपर्छ।
काठमान्डौ लगायतका शहरहरुमा गर्मी, वर्शाको समयमा देखिने जन्डिस प्राय: हेपाटाइटिस ए को कारणले गर्दा हुन्छ। यो रोग पानी, खानाबाट सर्छ। यो रोगले कलेजोमा लामो समयसम्म असार गर्दैन र धेरैमा त केही लक्षण पनि देखिदैन। यो रोगको खास उपचार केही हुदैन र केही समयपछी आफै ठीक हुन्छ।
जाडरक्सीको अधिक सेवनले कलेजो बिग्रेर जन्डिस देखिएको हो भने जाडरक्सी सेवन बन्द गर्नुको साथै अन्य विभिन्न उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ।
कसैकसैमा शारिरिक तनाव बढी हुँदा, ज्वरो आउँदा, अन्य सन्क्रमण हुँदा सामान्य जन्डिस देखिने हुन्छ,यो गिलबर्ट सिन्ड्रोम (Gilbert Syndrome) भन्ने रोगले गर्दा हुन्छ। यसमा कलेजोको एउटा इन्जाइमको मात्रा वन्शानुगत रुपमै कम हुन्छ। यो त्यस्तो डरलाग्दो रोग हैन र यसको उपचार पनि गरिरहनु पर्दैन तर जन्डिस देखिने अन्य धेरै रोगहरुसँग झुक्किने भएकोले यो रोग पत्ता लाग्न गाह्रो हुन्छ।
क्यान्सर, पत्थरीले गर्दा जन्डिस देखिएको भए त्यहि अनुसार उपचार गर्नुपर्छ।
समग्रमा, जन्डिसको उपचार भनेको जन्डिसको कारणको उपचार हो।
फुकेर जन्डिस कसरी निको हुन्छ?
धेरैजसो देखिने जन्डिस सामान्य प्रकारको, आफै ठीक हुने खालको हुन्छ। कतिमा यसको कारण हेपाटाइटिस ए, कतिमा अन्य सामान्य भाइरल सन्क्रमण, कतिमा खाइरहेको कुनै औषधीको असर आदि हुन्छ। यस्ता सामान्य कारणले देखिएको जन्डिस आराम गर्ने, स्वस्थ खाना खाने, धेरै चिल्लो नखाने, औषधीको असर भए त्यो औषधी नखाने गरेमा आफै निको हुन्छ। यति भनिसकेपछि फुकेर जन्डिस कसरी निको हुन्छ त भनिरहनु नपर्ला। किनकी सामान्य रोगहरुले गर्दा देखिएको भए यो नफुके पनि निको हुन्छ।
१) जन्डिसको हैन जन्डिसको कारणको उपचार गर्नुपर्छ। त्यसैले जन्डिसको कारण खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ र खाली रगतको रिपोर्टमा बिलिरुबिन बढी देखियो भनेर त्यस्कै पछि दौडी रहनुहुदैन।
२) जन्डिस देखिने बेलामा कलेजोमा असर परेको हुनसक्छ र कलेजोको एउटा काम चिल्लो खानालाई पचाउनको लागि पित्त उत्पादन गर्नु पनि हो। त्यसैले यस्तो बेला चिल्लो कम खाने, स्वस्थ खाना खाने, कलेजोलाई असर गर्नसक्ने औषधीहरु नखाने गर्नुपर्छ। धेरैको सोचाइ जस्तो बेसार बार्नु भने आवस्यक छैन। बेसार र जन्डिसको रंग बाहेक अरु केही सम्बन्ध छैन। साथै महँगो भिटामिन, लिभर टोनिक खानु भन्दा फलफुल, स्वस्थ खाना खानु फलदायी हुन्छ।
३) आफुलाई देखिएको जन्डिसको बारेमा आफ्नो चिकित्सकसँग सल्लाह लिनुपर्छ।
Posted by Dr. Samir Lama, MD General Practice at 8:16 PM 20 comments